Ralambomahay Toavina : “Be loatra ny mitabataba fa tsy sahy manohitra” | NewsMada
Aiza ho aiza ny toe-draharaham-pirenena? Na ny fanarenana ny fiainam-bahoaka… Maneho ny fijeriny ny mpandinika ara-politika, Ralambomahay Toavina: “Be loatra ny olom-pirenena milaza tsy faly amin’izao fiainana izao, nefa tsy sahy manohitra.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny resabe talohaloha teo ny amin’ny tokony hanovana na tsia ny governemanta?
Ralambomahay Toavina (-): Raha io lalàmpanorenana io, izay tena feno lesoka: mahazo manala ny praiminisitra ny filohan’ny Repoblika. Nefa matoa tazoniny ny praiminisitra, mbola mety aminy izany.
Mahazo manao fitsipaham-pitokisana ny praiminisitra ireo solombavambahoaka. Efa nanao izany izy ireo taorian’ny fanonganana ny filohan’ny Repoblika, nataony tamin’ny herintaona. Nefa nihemotra izy ireo, rehefa notreronin’ny vondrona iraisam-pirenena sy Ravalomanana Marc ary ny mpandraharaha sasany, fa hoe mila fahamarinan-toerana sy fitoniana ny firenena.
Avy eo, na ny volavolan-dalàna rehetra aza, nolanin’ny solombavambahoaka avokoa: lalàna momba ny Ceni, ny tetibola taona 2016…
* Ny fijerinao ny fifandanjan-kery politika eny anivon’ny Antenimierampirenena amin’izao?
– Nilaza tamin’ny valandresaka tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana ny filoha fa manana ny maro anisa izy. Koa tsy misy antony hanovana governementa izany. Ny niovan’ny praiminisitra ho jeneraly Ravelonarivo Jean aza, efa mampieritreritra… Satria tsy nisy ireo antony voatanisa ireo akory, ary tsy nisy na mpanohitra iray aza tamin’izany.
Tsy nilaza izay antony nanoloana an’ny Dr Kolo Roger ny filoha. Nefa betsaka ny olona efa nambara fa ho solon’ny jeneraly Ravelonarivo Jean. Mahagaga izany… Ireo olona voatanisa ireo: tsy manana antoko, tsy manana solombavambahoaka na iray aza. Nefa raha io lalàmpanorenana io, manolotra ny anaran’izay ho praiminisitra ny solombavambahoaka. Efa tsy nohajaina io lalàmpanorenana io.
* Raha misy tsy mety ny lalàmpanorenana, inona no hatao?
– Manohana an’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, izahay, raha hanova lalàmpanorenana tokoa izy. Mpanohitra izahay, sanatria tsy hiditra ao amin’io fanjakana io. Efa ela no nilazana hoe fitsapan-kevi-bahoaka tery vay manta ireny tamin’ny Tetezamita ireny. Maro ny Malagasy sy ny firenena vahiny tsy nanaiky izany, saingy toa niova hevitra tampoka teo tamin’ny nahalany ny filoha ankehitriny.
* Aiza ho aiza ny fizotran’ny fiainam-pirenena amin’izany?
– Mahagaga… Be loatra ny olom-pirenena milaza tsy faly amin’izao fiainana izao, nefa tsy sahy manohitra. Fihatsarambelatsihy no betsaka: tsy sahy. Ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi) aza, milaza hoe tokony hisy mpanohitra amin’izay.
Tsy misy azo terena hitsangana ho mpanohitra. Raha te hanohitra ny mpikambana ao amin’ny Sefafi, manan-jo hiditra antoko ka hanohitra. Misy fa odian-tsy hita ny mpanohitra: efa manana olom-boafidy izahay. Marina fa vitsy izahay, satria tsy sahy ny olona.
* Tsy atokisan’ny olona intsony ny mpanao politika?
– Marina fa mihamaro ny miditra amin’ny firaisamonina sivily, manao izay hahasoa ny tenany sy ny manodidina azy. Aman-jatony ny kaominina tsy tarihin’ny antoko fa fikambanana. Koa raha ampy tokoa izany: arahaba soa, arahaba tsara. Indray andro any, mety ho fikambanana no hitondra an’i Madagasikara fa tsy antoko. Tsy fahita eran-tany izay…
Zava-mahagaga hafa, maro ny mpandraharaha mitondra: ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna, solombavambahoaka, loholona… Mihena ny mpanao politika mitondra, fa mihabetsaka ny avy amin’ny firaisamonina sivily sy ny fandraharahana.
Koa mahagaga: ny mpanao politika hatrany no haratsiana… Sao tokony hifanaraka izy ireo?
Ny tena marina: any amin’ny firenena mandroso, manohana antoko ny mpandraharaha, ny firaisamonina sivily… Rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny antoko, efa mazava ny lalan-kodiavina. Aty amintsika, miseho tsy manao politika ny mpandraharaha sy ny firaisamonina sivily na ny mpikambana ao aminy; nefa avy eo, tonga tampoka tsy niomana eo amin’ny fitondrana ka miady an-trano.
* Ahoana ny amin’ny fiainam-bahoaka?
– Misy idiran’ny fiainam-bahoaka ny politika. Maro ny mihevitra fa tsy misy ifandraisana izany. Mila amboarina aloha ny saina fa mbola misy telo taona manoloana izao fitondrana izao. Nefa tsy misy ny jery lavitra azo atao na vina amin’izay hitranga…
Ny azo atao, manomana ny fifidianana manaraka. Tsy ny fifidianana filoha fotsiny, fa mila ekipa vonona amin’ny fifidianana faritra, faritany, fitsapan-kevi-bahoaka, ary mety hisy koa aza ny solombavambahoaka mialoha ny fotoana.
Eo amin’ny fiainam-bahoaka amin’izay… Tsy vaovao, ohatra, ny fisian’ny kere any atsimo, vao mainka koa mampalahelo. Izao izany ny mpitondra vao maka hevitra ho vahaolana. Tena diso safidy koa ny vahoaka na nanaiky hovidiana tamin’ireny fifidianana marobe ireny.